Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » CNN Jacaylka Cusub ee Samsung: Wayna bixisaa!
CNN iyo Samsung waxay ku shuraakoobeen olole caalami ah oo sahaminaya awoodda togan ee tignoolajiyada
CNN International Commercial (CNNIC) waxay la midowday Samsung Electronics (Samsung) olole xayaysiis oo muujinaya awoodda tiknoolajiyadda si loo dhiso mustaqbal wanaagsan oo dadka looga caawiyo inay ka gudbaan caqabadaha iyada oo loo marayo hal -abuurnimo farsamo.
Iyada oo loo marayo taxanaha filimka sumcadda leh 'Better Tech For All' iyo isku -dheelitirka astaanta ee tifaftirka tifaftirka 'Tech for Good', ololuhu wuxuu ku xiri doonaa Samsung dhegeystayaasha caalamiga ah ee CNN si loo soo bandhigo sida dadku u adeegsadeen tikniyoolajiyad hal -abuur leh si ay u xoojiyaan naftooda iyo bulshadooda.
Better Tech ee Dhammaan ', taxane summadeysan oo ay soo saartay CNNIC istuudiyaha summada caalamiga ah ee ku guuleysatey abaalmarinta Abuur, wuxuu raacayaa mawduuc guud oo ah hal -abuurro cajiib ah oo dadka u oggolaanaya inay barwaaqoobaan oo ay caqabadaha kaga gudbaan farsamada. Filimkii ugu horeeyay 'La Saxiixday Jacayl' waxaa ku jira David Cowan, oo ah turjumaan luqadda dhegoolaha ah oo muujiya caawinta ogeysiisyada rasmiga ah ee gobolka Georgia ee Mareykanka wuxuuna u turjumayay dhagaystayaasha ku dhawaad ​​soddon sano. Waxa uu daaha ka qaaday sida tignoolajiyadu ay xogta uga dhigtay mid la heli karo oo ay u wanaajisay tayada nolosha bulshada dhegaha la’. Iyada oo qayb ka ah ballanqaadka CNNIC ee joogtaynta, Abuurku wuxuu ku biiray hindisaha Ad Net Zero ee Ururka Xayeysiinta oo kan waa Filimkii ugu horreeyay ee la soo saaro kaarboon dhexdhexaad ah iyada oo la adeegsanayo xisaabiyaha kaarboon Albert si loo yareeyo raadadka kaarboonka. Fiiri tan muuqaallo gadaal laga daawado si aad wax badan uga ogaato sida kooxaha wax -soo -saarka adduunka oo dhan u jiheeyeen filimkan dhiirrigelinta ah.
n waxaa dheer, the 'Farsamada Wanaagsan' taxane ayaa bilaabay sanadkii labaad oo isku xigta, iyada oo la kaashanaysa Samsung. Waxaa marti ku ah CNN iyo wariye Kristie Lu Stout, xilli ciyaareedkii labaad ee 'Farsamada Wanaagsan' la bilaabay bishii Luulyo ee sannadkan waxayna ka kooban tahay afar qaybood oo 30-daqiiqo soconaya ilaa November oo dhan TV-ga Caalamiga ah ee CNN, oo leh waxyaabo dheeri ah oo ku saabsan aaladaha dhijitaalka ah iyo kuwa bulsheed, sahaminta sida tiknoolijigu u caawinayo dadka iyo bulshada inteeda kale wax walba laga bilaabo waxbarashada ilaa joogtaynta.
"Had iyo jeer waa mudnaan in aan iskaashi la yeelano hoggaamiye warshadeed sida Samsung oo kale ah dhiirrigelin dhiirrigelin ah oo lagu soo bandhigayo awoodda teknolojiyadda," ayuu yidhi Rob Bradley, Madaxweyne Ku Xigeenka Sare, CNN International Commercial. "Ku-xoojinta sheeko-tayada tayada leh iyadoo la adeegsanayo aragtida xogta iyo falanqaynta waxay ka dhigaysaa xal cusub oo isku xiri doona sumadaha dhageystayaasha muhiimka ah ee adduunka oo dhan. Waxaan sugeynaa wada -shaqeyntaan dhiirri -gelinaysa dhagaystayaasha CNN inay ka fekeraan mustaqbalka oo ay hagaajiyaan nolosha dadka kale annagoo u abuurnay tiknolojiyadda wanaag. ”
Hybrid City Alliance waxay ku biirtay xoogaga magaalooyinka ugu wanaagsan
Hay'adaha Saamaynta Ku Leh Bani'aadamnimada